/ब्लग/ग्यालरी/ओक्सिम्याथलोन समीक्षाहरू: अल्टाइम गाइड ओक्सिमथोलोन (Anadrol)
प्रकाशित 01 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
यो आश्चर्यचकित छैन कि शरीर निर्माणका सबै भन्दा कठिन चीजहरूमध्ये एक हो जसले आफैलाई समावेश गर्दछ। यद्यपि, यदि सही उत्पादन, प्रशिक्षण, र आहार संग सही तरिकाले गर्नुभयो भने, यसलाई दोहोरो अंशमा पुरस्कार दिईन्छ। वास्तविकतामा, एक्लै वजन र प्रशिक्षण लिने तपाईले तपाइँको आदर्श नतिजाहरू दिनुभन्दा धेरै विचार गर्न सक्दछ। Oxymetholone (Anadrol) एक उत्पादन हो कि तपाई आफ्नो शरीर सौष्ठव यात्रालाई यो आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा सन्तुष्ट अनुभव बनाउने परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को कुरा यो हो कि तपाईले उमेरको रूपमा, शरीर हार्मोनको उत्पादन टेस्टोस्टेरोन जस्तै कम हुन्छ र तपाईले मात्र यो विकल्पको सिंथेटिक संस्करणको आधारमा छोड्नु भएको छ। शरीरमा टेस्टोस्टेरोन जस्तै कार्यहरू र संभावनाहरू छन् कि यसले थप फाइदाहरू प्रदान गर्नेछ। पछि भन्दा बढी। न केवल यो तपाईले आफ्नो शरीरमा प्रगति देखाउनुहुनेछ तर अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले तपाइँलाई कुनैपनि भौतिक प्लेटसाउहरूमाथि यो यात्रामा चुनौती दिन सक्नेछ।
यदि तपाईं एक सुन्दर शरीर निर्माण गर्ने जीवनशैलीमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले Anadrol लिनैपर्छ किनभने यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाईंको मांसपेशी जन र बल बढाउन मद्दत गर्नेछ। अब सम्म तपाई अधिक जान्न चाहनु हुन्छ Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1)। तपाईले यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी एक मिनेटमा पाउनुहुनेछ।
ओक्सिम्याथोलोन (Anadrol) के हो?
अक्सिमेथियोलोन Anadrol 50 को लागि ब्रान्ड नाम हो जुन यो एक धेरै ज्ञात एनाबोलिक एन्ड्रोजेनिक स्टेरॉइड हो। आफैलाई सोध्नु भनेको "50" को अर्थ हो? यसले मिलिग्रामहरूलाई यो स्टेरॉइडमा बन्द गरिएको छ। यहाँ Anadrol को लागि अन्य ब्रान्ड नामहरू छन्;
1960s मा केहि औषधि कम्पनीहरु Anadrol विकसित। यी कम्पनीहरूमा Zoltan, Syntex, र पार्क डेविस शामिल छ। विगतमा, यो एनिमेमा पीडित व्यक्तिहरूमा रातो रक्त खण्डहरूको उत्पादन बढाउन प्रयोग भएको थियो। यो पनि भूख वृद्धि गर्न को लागि प्रयोग भएको थियो, हड्डियों को सुदृढीकरण र मांसपेशिहरु लाई मारने मा रोगहरु लाई नष्ट गर्न को लागि सहायता। एक दिन उन रोगहरु मा एड्स भएको थियो जसमा एड्स थियो कि 30 हप्ता सम्म र जसको शरीर मांसपेशी अपशिष्ट मा जान्छ, ले भन्यो कि यो स्टेरॉयड उनको अध्ययन को अवधि को अन्त सम्म आठ किलो को औसत प्राप्त गर्न को लागि मदद गर्दछ।
यो पछि मानिसहरुलाई बुझ्यो कि यो शरीर सौष्ठव उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिजुली निर्माणकर्ताहरूले यसलाई ठूलो मांसपेशी जन प्राप्त गर्न प्रयोग गरेर शुरू गर्यो। आज अक्सिमिथोलोन (Anadrol) (CAS 434-07-1) बजारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मौखिक एनाबिक स्टेरियोडहरूको रूपमा मानिन्छ। यो कुनै अचम्म छैन कि यसले दुई स्टेरियोड्सको रूपमा छिटो छिटो ठूलो मांसपेशिहरु निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। एन्ड्रोजेनिक अनुपातको यसको anabolic 350: 55 हो। कुनै पनि बिल्डरबिल्डरले यसलाई प्रयोग गरेको छ भने यो स्टेरिइडले तथ्याङ्कमा के तुलनामा अधिक एरेजनिक छ भनेर प्रमाणित गर्दछ।
अर्को कुरा जसले धेरै मानिसहरूको बीचमा सामान्य स्ट्रिइड बनाउँछ भन्ने कुरा तथ्य हो कि यो मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ। यो यसको कारणले यो 17aa स्टेरॉइड हो भन्ने अर्थ हो कि यो संरचनात्मक रूपले यसको 17 मा बदलिएको छ।th एटम यसैले मौखिक रुपमा लिन सकिन्छ।
Oxymetholone एक अत्यंत प्रभावकारी anabolic स्टेरॉइड हो जसको प्रभाव शक्तिशाली हो कि यो औषधि टेस्टोस्टेरोन भन्दा तीन पटक बलियो हुन्छ। एक anabolic स्टेरॉयड को लागि के तपाईं चाहते हो?
Oxymetholone (Anadrol) कार्य को तंत्र
Oxymetholone एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरेर डेरिभेटिभ हो जुन एन्ड्रोजेनिक गतिविधिमा उच्च एनाबोलिक छ। यसले ऊतक र अङ्गहरूमा हाइड्रोन-रिसेप्टर परिसरको निर्माण गर्ने एन्ड्रोजनको साइटोप्लस्मेटिक टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टरसँग बाध्यकारी काम गर्दछ। हार्मोन-रिसेप्टर परिसर पछि डीएनए सँग बाँध्छ यसैले डीएनए ट्राफिकेशन र एमआरएनए गठन को प्रोटोनन को बढावा दि्छ जो प्रोटीन को संश्लेषण गर्दछ।
साथै, Oxymetholone एरिथ्रोपोइसीज को गति को समयमा पनि एक कंबोलिक प्रभाव कंकाल मांसपेशियों र कंकाल मा लागू हुन्छ। साथै, यो औषधि erythropoietin को स्तर बढाएर शरीर मा एक औषधीय क्रिया को दर्शाता छ जो लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन मा मदद गर्दछ। यसले शरीरमा नाइट्रोजन सन्तुलन बढाउँछ र पानी अवधारणको बढावा बढाउँछ।
शरीर निर्माणको लागि ओक्सिम्याथोन के प्रयोग गरिन्छ?
Oxymetholone शरीरको निर्माणको धेरै फाइदा छ जुन त्यो टेबलमा ल्याउँछ। तिनीहरूमध्ये केही छन्।
यसले प्रोटीन संश्लेषण बढाउँछ- मांसपेशिहरु को विकास प्रोटीन संश्लेषण को परिणाम को रूप मा हो किनभने यो शरीर को मांसपेशियों मा मुख्य भवन ब्लक हो। एकपटक तपाईं काम गर्नुहुँदा त्यहाँ मांसपेशी प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जसले मांसपेशियोंको विकासलाई उल्टाउँछ। तपाईंको मांसपेशिहरु को आकार को बढाने को लागि, शरीर को उनको टूट को तुलना मा अधिक प्रोटीन संश्लेषण हुनु पर्छ, र प्रोटीन संश्लेषण को प्रोमोन ओक्सिमथोलोन द्वारा, त्यहाँ ठूलो मांसपेशियों को निर्माण हुन्छ।
यसले रातो रक्त कोशिकाहरूको उत्पादन बढाउँछ- रातो रक्त कोशिकाले तपाईंको मांसपेशिहरु राम्रो तरिकाले ओक्सीजनित हुन्छ त्यसैले यसैले बे मा थकान राख्छ। यसकारण, तपाईले अत्यधिक थकानबाट पीडित बिना राम्रो कार्यकार्य गर्न सक्नुहुनेछ जुन यसैले राम्रो मांसपेशियोंको परिणाम हो। एक बिल्डर बिल्डरले सहनशीलताबाट लाभ उठाउछ किनकि उसले / तिनी हरेक हप्तामा कडा मेहनत गर्न सक्षम हुन सक्छ।
Anadrol नाइट्रोजन अवधारण बढ्छ- यो स्टेरॉइडले तपाईंको मांसपेशी भण्डारण गर्न नाइट्रोजन को मात्रा बढाउन सक्छ। यसबाट फाइदा हुन्छ कि अधिक पोषक तत्वहरू तपाईंको मांसपेशीमा डेलिभर हुने छ त्यसैले कामको पछि बढ्न र राम्रो रिकभरी बढाउँछ।
यो मासु को समयमा काट मा राख्छ- कुनै पनि मांसपेशिहरु गुमाउन चाहँदैनन् जुन काटिएको चरणको लागि काम गरिसकेको छ। कुन एनाल्रोलले यो माटोहरू नष्ट नगरी शरीरमा बोसो सेलहरू नष्ट गर्छ र नष्ट गर्दछ। एक पटक मांसपेशिहरु को माछा माछा माने पछि मांसपेशियों अब कटौती र दुबला लगेगा। एक कठिन र हल्का दृश्यको लागि गणना Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1।
यसले भूख बढाउँछ-एक शरीर बिल्डरले शरीरको लागि धेरै क्यालोरीहरू मासुको निर्माण गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। तर समस्या आउँछ जब भूखको कमीले आवश्यक क्यालोरीमा लिन्छ। ओक्सिमिथोलोनले तपाईंलाई पर्याप्त भूखान दिन्छ जसले तपाईंको क्यालोरीको मात्रा बढाउँछ।
पावर थ्रडल बढ्छ- Anadrol ले तपाईंको शक्ति वृद्धि गर्नेछ, एक लाभ जो भारोत्तोलनका लागि राम्रो छ।
शरीरको बलमा वृद्धिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो- ओक्सिमितोथोनले बलियो सुधार गर्दछ र यदि तपाइँ केहि चीज खोज्दै हुनुहुन्छ जो तपाईंलाई अधिक स्फ्याट गर्न मद्दत गर्नेछ र कंधे अधिक निश्चित रूपमा तपाईं सही ट्रयाकमा थिच्नु हुन्छ। यसको समीक्षाबाट जाँदै, यो ड्रगले यसको उपयोगमा बलियो तागत बनाउँछ।
नाटकीय रूप मा मांसपेशियों को विकास को बढावा गर्दछ- धेरै बासिन्दाहरूले मांसपेशीलाई लाभ उठाउन खोजेको छैन। संग Oxymetholone, तपाईंलाई धेरै मेहनत गर्ने प्रयास छैन। एकपटक तपाईंले यी गोलहरू पपअप गर्नुभए पछि, तपाईं दुई महिना भन्दा कम मा मांसपेशीहरू प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो औषधि प्रयोग गर्ने को बारे मा सबै भन्दा राम्रो भाग यो छ कि तपाईं आफ्नो मांसपेशिहरु ठूलो हो रही देख शुरू गर्न को लागि यति लामो प्रतीक्षा को लागि छैन। दोस्रो हप्ता भित्र, तपाईं केहि फरक कुरा देख्न सक्नुहुनेछ।
यो छिटो काम गर्दैछ यसैले नतिजा अपग्रेड गर्दछ- यदि तपाईं धैर्यमा राम्रो हुनुहुन्न भने, तपाईले यो सराहना गर्नुहुनेछ कि यस स्टेरॉइडले छोटो समय भित्र पूर्ण परिणाम दिन्छ। यसले तपाईको शरीरको शरीरमा आठौं हप्ता भन्दा कम शरीरको लक्ष्य पूरा गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रदर्शन सुधार गर्दछ-मांसपेशिहरु को निर्माण को वाहेक, Anadrol ले प्रदर्शन मा एक ठूलो बढावा दि्छ। नतिजाको रूपमा, बडिबिल्डर र एथलीटहरूले प्रशिक्षण सत्रबाट छिट्टै पुनः प्राप्त गर्न सक्छन्। फलस्वरूप, तिनीहरू कडा र अझ धेरै रमाइलो गर्न सक्छन्।
वजन मा सहयोग गर्दछ- यदि तपाईं आफ्नो शरीरलाई फुलर लगाउन र अझ बढी प्रभावशाली बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले प्रयोग गर्न विचार गर्नुपर्दछ अक्सिमथोलोनको वजनको लागि। धेरै मान्छे जो यो प्रयोग गरेको छ भनेर रिपोर्ट गरेको छ कि यसले तिनीहरूलाई अचानक वजन प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। 20-30 हप्ता भित्र 4-6 पाउन्ड राख्नु कुनै मजाक छैन, र Anadrol ले यसको भन्दा बढी वितरित साबित गरेको छ।
सहनशीलता बढाउँछ- थप विस्तारित अवधिको लागि तपाईंको कसरत वा प्रशिक्षण सत्रमा खोल्न सक्षम हुनुको लागि प्रत्येक बिल्डर बिल्डरको लागि केहि कुरा हो। एक Oxymetholone नतिजा मध्ये एक छ कि यो तपाईंको साम्राज्य उठ्छ जब तपाईं आफ्नो शरीर को प्रशिक्षित गर्न को लागी को रूप मा जब सम्म तपाईं अंतिम जन निर्माण को लागि अग्रणी चाहते हो।
संयुक्त दुखाइले सोचेको छ- यो दुखाइले एक नम्रतापूर्वक काम गर्न सक्छ र एडेड्रोल मांसपेशी जन र बल सिर्जना गर्न जान्दछ तापनि, यो एक दर्दनाक भावना लाई यस संयुक्त दुखाइ को कम गर्न मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। तपाईंसँग अझ धेरै जसरी तपाईं जस्तै मनपर्ने वजन उठाने को लागि कुनै बहाना छैन।
ओक्सिम्याथोलोन (एनाडोल) खुराक
भर्खरै Anadrol 50 ले तपाईंलाई राम्रो नतिजाहरूको ग्यारेन्टी गर्दैन। यदि तपाईं सकारात्मक नतिजाहरू लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई सही खुट्टा लिन आवश्यक छ। यसको बाहेक, सही खुराक लिनु तपाईंलाई सम्भावित साइड इफेक्टहरूबाट सुरक्षित गर्दछ जुन गलत लिने क्रममा लिङ्क गरिएको छ Anadrol खुराक। यद्यपि, Anadrol खुट्टा एक व्यक्तिबाट एक लक्ष्यको आधारमा अर्को भिन्न हुन्छ।
केहि खुराक खुराक को विरोध को रूप मा जसको राशि तपाईं ले चक्र को विभिन्न चरणहरुमा परिवर्तन गर्छन, Anadrol दैनिक 50mg को एक मानक खुराक छ। शुरुआतीले 25mg-50mg को रूपमा कम एक खुराक संग सुरु हुन सक्छ, र यदि तिनीहरूका शरीरले लागूपदार्थ सहन सक्छ भने, उनीहरूले अब सेवन बढाउन सक्दछन्।
धेरै मान्छे यो औषधि मा अधिक मात्रा मा सोच रहे हो कि यसले आफ्नो भूख बढाए पनि अधिक। तथापि, यो Anadrol संग मामला छैन। यसले रिवर्समा कार्य गर्दछ किनभने यसले एक पटक एक पटक भत्कियो। साथै, यो सिफारिस गरिएको छ कि यो यो औषधिको उच्च खुराक नगर्ने कारणले यो गम्भीर दुष्प्रभावको कारण हुनसक्छ।
यदि तपाईं थोडा धेरै बफाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो खुट्टा बढ्न सक्छ 100mgs मा। तथापि यो सल्लाह दिइएको छ कि तपाईले यो मात्र गर्नुभयो भने तपाईंको शरीरले यो सहन सक्छ। 150mgs भन्दा बढि गल्ती नगर्नुहोस् किनभने यो तपाईंको लीभरको लागि राम्रो हुनेछैन। यो पनि तपाईंको cravings को कमी को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ, र यो मतलब हुनेछ कि तपाईं आफ्नो विकास को रोकथाम गर्न प्रयोग गरे जस्तै तपाईं खाने सक्षम छैन।
ओक्सिमिथोलोन (एनाड्रोल) चक्र र स्ट्याक
ओक्सिम्याथोलोन (एनाड्रोल) चक्र
धेरै बडी बिल्डर्सहरूले तिनीहरूको प्रदर्शन बढाउनको लागि तिनीहरूको चक्रमा Anadrol को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन्छ। यहाँ केही चक्रहरू छन् जुन तिनीहरूमध्ये धेरै रुचि गर्छन्;
1। शुरुवातका लागि
यसले बाह्र हप्ता लिन्छ।
हप्ता 1 हप्ता 6- दैनिक Anadrol को 25-50m ले लिनुहोस्
हप्ता 1 हप्ता 12- लिनुहोस् 300-500m प्रति हप्ताको टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट।
यो शुरुवात-अनुकूल Anadrol चक्र मध्ये एक हो जहाँ टेस्टोस्टेरोन यसको भाग हो र उच्च खुराक मा आवश्यक एनाबोलिक प्रभाव पैदा गर्नेछ। अर्कोतर्फ, Anadrol सामान्य खुराकमा छ कि एक शुरुवात लिन को लागी सल्लाह दिइएको छ।
यस चक्रमा, यो सल्लाहकार छ कि तपाईं उच्च एस्ट्रोजेनिक प्रकृतिको कारण यो स्ट्याकमा SERM जस्तै Nolvadex वा कुनै aromatase अवरोधक लिनुहोस्। कुनै पनि शुरुवातको लागि जो बल्क अप गर्न चाहानुहुन्छ, यो जाने को लागि सबै भन्दा राम्रो Anadrol चक्र हो।
2। मध्यवर्ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि
हप्ता 1 हप्ता सम्म 6- दैनिक Anadrol को 50mg लिनुहोस्।
हप्ता 1 हप्ता 12- साप्ताहिक रूपमा 400mg को डेका Durabolin (नान्ड्रोलेन डेकनो)।
साथै, 100mg को लिनुहोस् टेस्टोस्टेरोन Enanthate साप्ताहिक।
तपाईले पाएको छ, पहिलो चक्र तुलनामा यो चक्रमा केहि परिवर्तनहरू छन्। यो चक्र प्राथमिक anabolic छैन, र यसको लागि मुख्य उद्देश्य Anadrol जस्तै ड्रग प्रयोग गर्दा चक्रमा एस्ट्रोजनिक गतिविधि को वृद्धि को कम गर्न छ।
डेक्का डराबोलिन यस चक्रमा काम गर्दछ जब एकले Anadrol को प्रयोग को समाप्त गर्दछ किनभने यो एक anabolic यौगिक हो। यस एनाल्रोल चक्रमा, यसको खुट्टा केवल 50-100 मिलीग्राम प्रति दिन 50 मिलीग्राम दिनको लागि घटाइएको छ। यो किनभने यो औषधी अत्यधिक एनाबोलिक हो। यसैले, Anadrol खुराक मा वृद्धि को आवश्यकता छैन। सामूहिक वा बल प्राप्त गर्नका लागी, 50mg को एक खुट्टा एक मध्यवर्ती प्रयोगकर्ता को लागि पर्याप्त भन्दा अधिक छ।
3। उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि
यसले आठ हप्ता लिन्छ।
हप्ता 1to हप्ता 8- 100mg को Anadrol प्रति दिन
25mg टेस्टोस्टेरोन प्रोभियन्स को 100mg साप्ताहिक मा हरेक वैकल्पिक दिन लिनुहोस्
100mg Trenbolone एसीटेट 400mg साप्ताहिकमा हरेक वैकल्पिक दिन लिनुहोस्।
अरूसँग यो उन्नत चक्रको फरक यो हो कि यसले छोटो अवधि लिन्छ। यसमा स्टेरियोडहरू पनि समावेश छन् जुन टिनबोलोलोन एसीटेट र टेस्टोस्टेरोन प्रोभियन्स जस्तै छोटो एस्टर्सहरू छन्। यसको प्रयोग छ हप्ता सम्म सीमित छ, र यो अधिक विस्तारित अवधि को लागि प्रयोग गर्न को लागि सल्लाह छैन कि मुख्य रूप देखि प्रति दिन 100mg को उच्च खुराक को कारण।
उच्च Anadrol खुराक को बारे मा सबै भन्दा राम्रो भाग यो ट्रांजेनोन एसीटेट संग जोडी भएको एक नाटकीय शक्ति र भारी लाभ को पेशकश को लागि सक्षम छ।
यो चक्र मात्र उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुशंसित गरिएको छ किनकि यसले व्यक्तिगत स्तरको अतिरिक्त शक्ति र आकारको कारणले गर्दा अन्य स्तरका प्रयोगकर्ताहरूमा चोट लगाउन सक्छ।
ओक्सिमिथोलोन (एनाड्रोल) स्ट्याक
Anadrol 50 ले उच्च बहुमुखीता प्रदान गर्दछ किनकि तपाइँ यसको प्रयोगमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा अन्य स्टेरियोड्ससँग सँगै स्ट्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
Anadrol मात्र चक्र- यो चक्रको साथ, तपाईलाई उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव छ। जब तपाईं स्ट्याक गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ, यो स्टेरियोड्सहरू छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईले यसलाई स्ट्याक गर्नका लागि साइड इफेक्टहरू बढ्नबाट बच्न। यदि तपाईं सुरक्षित तरिकामा स्ट्याक गर्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ त्यस तरिकाहरू छन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ;
हल्का एनाबोलिक्स प्रयोग गर्नुहोस्- यो राम्रो छ कि तपाईं यसलाई SARMS, Equipoise, Primobolan, र डेक् Durabolin जस्तै हल्का एनाबिक स्टेरियोड्ससँग स्टक गर्नुहुन्छ।
धेरै उच्च खुराकहरूमा एन्ड्रोजेनिकिक स्टेरियोड्ससँग स्ट्याक नगर्नुहोस्-यो स्टेरियोड्स जस्तै टेस्टोस्टेरोन वा ट्रेनबोलोनसँग स्ट्याक गर्दै गर्दा तपाइँले 200mg भन्दा बढी Anadrol खुराक लिनुबाट जोगिनै पर्छ।
DHT डेरिभेटिभका साथ यसलाई स्ट्याक गर्न नदिनुहोस्- Masteron र Winstrol जस्तो स्टेरियोड्सहरूसँग Anadrol स्ट्याकिङ राम्रो भन्दा बढी हानि हुनेछ। तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर साइड इफेक्ट यो आउनेछ कि अनावश्यक छ। घटनाहरूमा जहाँ विनेस्ट्रोलसँग स्टक गरिएका व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ गम्भीर कपाल हानिको रिपोर्टहरू थिए।
अन्य स्टेरियोडहरूसँग यो स्ट्याक गर्नदेखि जोगिन जसले जिगरमा हानि पुऱ्याउँछ-मौखिक स्टेरियोड्स संग स्ट्याकिंग देखि बचें किनकी उनि ज्वलंत जस्तै जिगर समस्याओं को कारण हुन सक्छ।
लामो समयका लागि स्ट्याक नगर्नुहोस्-चार हप्ता हुने स्ट्याकिङको लागि औसत समयको साथ, यो ध्यान दिनुहोस् कि प्रयोगको समय र खुसीको मात्रा अधिक तपाईले बढ्नुहुन्छ, अधिक साइड इफेक्टहरू गम्भीर हुन्छन्।
यसकारण तपाईंले गर्नु पर्छ, कुनै पनि ड्रग्सको दुरुपयोग नगरी बुद्धिमानी रूपमा ओक्सिम्याथेलोन स्ट्याक लिनुहोस्।
किनभने Anadrol बजारमा सबै भन्दा शक्तिशाली एनाबिक स्टेरियोड्स मध्ये एक हो, यो उत्कृष्ट पोस्ट-चक्र उपचारमा राखिएको राम्रो छ। यसको लागि उद्देश्य तपाईं आफ्नो लाभ राख्न अनुमति दिन्छ। चक्र पछि प्राप्त भएका सबै चीजहरू हराउन उचित हुँदैन, के हो? थप रूपमा, PCT ले तपाईंलाई साइड इफेक्टहरूबाट टाँस्न मद्दत पुर्याउँछ जुन टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको दमनको कारण हुन सक्छ।
चूंकि Anadrol धेरै छोटो आधा जीवन छ र छोटो एस्टर छ, तपाईंले अन्तिम खुट्टा लिने तीन दिन पछि आफ्नो PCT सुरु गर्नु पर्छ यदि तपाईं यसलाई मात्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई लामो स्टिकरको कुनै पनि स्टेरॉइडसँग स्ट्याक गर्दै हुनुभयो भने, तपाईंले अन्तिम खुट्टा लिन पछि PCT 14-18 दिन सुरु गर्नुपर्छ। नोल्वाडेक्स वा क्लियोडले तपाइँको शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको प्राकृतिक उत्पादन किकस्टार्टलाई मद्दत गर्नेछ। यहाँ ड्रग्स लिने तरिका हो।
हप्ता Nolvadex / प्रति दिन प्रति दिन क्लूम
ओक्सिम्याथोलोन (एनाड्रोल) साइड इफेक्ट्स
यो Anadrol परिणामहरू राम्रो छन्, तर कहिलेकाहिँ तिनीहरू अप्रिय साइड इफेक्ट्स संग आउन सक्दछन्। अधिकांश अननाल साइड इफेक्ट्स व्यवस्थित छन् र तपाईले गरे पछि एक चोटि पास हुनेछ।
यदि तपाई एलर्जी प्रतिक्रियाको कारण यी संकेतहरू मध्ये कुनै प्राप्त गर्नुहुन्छ भने चिकित्सकको ध्यान खोज्नुहोस्;
गला, जिब्रो, होंठ र अनुहारको सुँगुर
कठिन सास फेर्न
यसको दीर्घकालीन प्रयोगको कारण Anadrol साइड इफेक्टहरू धुरी वा जिगरमा रक्त भरी अल्सरहरू हुन्। यो पनि जिगर ट्यूमरको कारण हुन सक्छ।
यदि तपाइँसँग यी छन् भने एक चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस्;
आँखा र छालाको जन्डिस-ज्वरो।
खुट्टा र हातको सुँगुर
छालाको रंगमा परिवर्तनहरू
छातीमा दुखाइ सुत्न
ब्लिडिंग (ब्लिडिंग गम वा नाक ब्लडिंग) वा सजिलो चोट, बिना रोक्न ब्लिडिंग
यौन सम्बन्धमा एक फरक ब्याज, कमजोरीमा उत्पादित वीर्यको मात्रा घट्यो, संक्रामक र असक्षमता
एक पटक यो खण्डमा एक पटकको दुखाइ महसुस गर्छ
कठिन या दुखदिक पेशा
अक्सिमेथियोलोन प्रयोग गर्ने महिलाहरूले मोजुलियल सुविधाहरू विकास गर्न सक्दछन् र त्यसो गर्नु पर्छ, त्यसोभए, उनीहरूले एक चोटी पछि यसको प्रयोग रोक्न वा डाक्टरको सल्लाह खोज्न। तिनीहरू समावेश छन्;
कम मा कमी वा सेक्स मा रुचि बढयो
मासिक धर्म अवधिमा परिवर्तन
Clitoris को बढावा
अनुहारको कपाल बढ्यो
छातीमा कपालको विकास
गहिरो वा होश आवाज
सामान्य साइड इफेक्ट जो दुवै पुरुष र महिला मा हुन्छ;
निद्रा समस्याहरू (अनिन्द्रा)
उत्साहित वा बेपरवाह महसूस
स्तन सुँगुर र दुर्व्यवहार (पुरुष र महिला दुवैमा)
के ओक्सिम्याथोलोन (Anadrol) सुरक्षित राख्न छ?
Anadrol सुरक्षित छ? यस प्रश्नले यो औषधी लिन चाहेको धेरै व्यक्तिहरूको दिमागलाई जोड दिन्छ। Anadrol 50 सुरक्षित भएमा सुरक्षित छ, तर यो हुन सक्छ यदि तपाईं निम्न सर्तहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने;
यदि तपाइँ कुनै पनि रक्त जान्तेन, कोमडिनिन, वारफिन जस्ता औषधि पिसाब गर्दै हुनुहुन्छ
ब्लिङिङ वा खून क्लटिंग विकार छ
उच्च कोलेस्ट्रल वा ट्रिग्लिसराइड्स
मुटु सम्बन्धि रोग
हृदय रोग, कोलाहल हृदय हृदय विफलता
लिभर वा गुर्दे रोग
रक्त मा धेरै क्याल्सियम संग महिला स्तन क्यान्सर
पुरुष स्तन क्यान्सर
तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने Anadrol तपाईंको लागि सुरक्षित छैन। यसले तपाईंको विभेदित बच्चालाई हानि पुऱ्याउन सक्छ र जन्मको दोष पनि बढाउन सक्छ। यदि तपाइँ गर्भवती भए तापनि यो औषधि प्रयोग गरेर हालै एक डाक्टर हेर्नुहोस्। यस औषधी प्रयोग गर्दा तपाइँलाई जन्म नियन्त्रणको प्रभावकारी तरिका प्रयोग गर्न पनि सल्लाह दिइएको छ।
यो दबाइले महिला र पुरुष दुवैको लागि प्रजननलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र यसैले, धेरै सावधानीपूर्वक लिनु पर्छ।
स्तनपान दूध को माध्यम ले यो एक स्तनपान को बच्चाहरु लाई पारित गरेको छ कि अध्ययन मा अझै अध्ययन गरिएको छैन, र यो थाहा छैन कि यसले कुनै हानिकारक हुन सक्छ। यो औषधि प्रयोग गर्दा तपाईंको सानो स्तनपान गर्नबाट बचाउन सकिन्छ।
अठारह वर्षको उमेरमा व्यक्ति यो औषधि प्रयोग गर्नुपर्दैन किनभने यसले उनीहरूको हड्डीको विकासलाई असर पार्न सक्छ।
किन्न Anadrol हाम्रो साइटबाट र डिलिवरी प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँ हामी तपाई बाट अर्डर गर्छौं;
तपाईं हामीलाई हाम्रो ईमेल, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, अनलाइन स्काइप वा हाम्रो ईमेल अन्वेषण प्रणाली मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
हामीलाई राम्रो सेवा गर्न सक्षम पार्न, आदेशको सन्दर्भमा सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नुहोस्, यानी, तपाईंको ठेगाना र मात्रा खरीद गर्न चाहानुहुन्छ।
हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि तपाईलाई फिर्ता दिइनेछ र तपाईंलाई डिलीवरी तरिका, अनुमानित आगमन मिति (ईटीए), ट्र्याकिङ नम्बर, उद्धरण र सबैभन्दा उपयुक्त हुने भुक्तान सर्तहरू प्रदान गर्नेछ।
तपाईंको अर्डरको लागि एक पटक भुक्तानी भएपछि, बाह्र बाह्र घण्टा भित्र सामानहरू तपाईंलाई पठाइन्छ (यो दस किलोग्राम भन्दा माथि छ)।
अक्सिमेथोलोन (Anadrol) अवैध छ?
ओक्सिमथोलोनको बिक्री, बिक्री र खरिद गर्ने वैधता देशबाट देशमा भिन्न हुन्छ। उदाहरणको लागि, बेलायती, क्यानाडा र अमेरिकामा यो लागू औषधिको प्रयोगलाई अनुमति दिइएको छ, तर अवैध ट्रगिङ रद्द गरिएको छ। समस्याहरू पत्ता लगाउनदेखि बच्नको लागि, तपाइँको देशले एनाल्रोल प्रयोग अनुमति दिन्छ भने जाँच गर्नुहोस्।
अधिकतर देशहरूमा, तपाइँ यसलाई केवल प्रिस्क्रिप्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर परेशानबाट बच्न सक्नुहुन्छ तपाइँ यसलाई अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले अक्सिमथोलोन (एनाडोल) कहाँ प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाई आफैँ संलग्न हुनुहुन्छ शरीर निर्माण, तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको मांसपेशियों को विकास को डिग्री संतोषजनक छैन। तपाईं सबै गर्न सक्नुहुन्छ पछि, तपाईं जहाँ तपाईं हुन चाहनु भएको छैन कि नोटिस गर्न निराश हुन सक्छ। अन्य अवसरहरूमा, तपाईं ध्यान दिनुहुन्छ कि तपाईंको शरीरमा धेरै वोसो निर्माण हुन्छ। यस्तो बोसो तपाईंको मांसपेशी लुकाउन सक्नुहुनेछ, र तपाईले आफैंलाई सबै ठप्प देख्न सक्नुहुनेछ।
जब यस्तो अवस्थामा, अर्को कुरा सोच्ने कुरामा जोड नगर्नुहोस्। जिन्दगीमा सबैलाई सोध्नु पर्ने दिनहरू तपाईंको मांसपेशिहरु निर्माण गर्नको लागि लामो समयसम्म चलेको छ। आजकल, तपाईं इन्टरनेट मा सर्फ गर्नुहुन्छ, र तपाइँ सबै साइटहरु लाई स्टेरियोड्स अनलाइन बेच्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईं कसरी किन्नको लागि उत्तम साइट जान्नुहुन्छ?
तपाईले किन्नुभएको कुनै स्टेरॉयड जस्तै, यो आवश्यक छ कि तपाइँ एक विश्वसनीय स्रोतबाट Anadrol 50 किन्नुहोस्। त्यहाँ तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाई सर्वश्रेष्ठ ओक्सिम्याथोन मूल्य र गुणस्तर प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। इन्टरनेटका साथ विक्रेताहरूको नाममा धेरै स्क्यानरहरू छन्, तपाईं साइटहरू जो कि नकली वा प्रदूषित स्टेरियोडहरू बेच्न सक्नुहुन्छ। केहि एनाबिक स्टेरियोडहरूसँग कुनै प्रामाणिकता ग्यारेन्टी नहुन सक्छ, र तिनीहरूले तपाईंको शरीरलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छन्। परिणामहरू पहिले र पछि ओक्सिम्याथलोन दुई संसारहरू जस्तै छन्, र यो स्ट्रिइड प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्दा यो मामला हुनुपर्छ।
हाम्रो साइट AASraw.com मा, तपाईं शुद्ध गर्न र शुद्ध छ Anadrol गर्न सक्षम हुनेछ। हाम्रो oxymetholone मूल्य जेब अनुकूल छ, र यसको वैधता संग, तपाईं राम्रो Anadrol परिणाम र न्यूनतम Anadrol दुष्प्रभाव प्राप्त गर्न को आश्वासन प्राप्त गर्दै छन्। हामीलाई आज बाट अर्डर गर्नुहोस् र तपाईले यो चाहनु भएको शरीरलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।
सार्टोक टी, दालबर्ग ई, गुस्फफ्लन जेए (1984)। "Anabolic-androgenic स्टेरियोड्स को सापेक्ष बाध्यकारी सम्बन्ध: कंकाल मांसपेशिहरु मा र एस्ट्रोजन मा एन्ड्रोजन रिसेप्टर्स को बाध्यकारी को तुलना, साथ ही सेक्स हार्मोन-बाइनिंगिंग ग्लोबिन"। Endocrinology. 114(6): 2100-6।
Pavlatos एएम, फल्ट्ज ओ, मोनबर्ग एम जे, वुट्स्ट ए, फार्मम (2001)। "ओक्सीमथोलोनको समीक्षा: एक 17alpha-alkylated anabolic-androgenic स्टेरॉयड"। Clin Ther. 23(6): 789-801।
Zderic, जन ए .; कार्पियो, हम्बोटो; रिंगोल्ड, एचजे (जनवरी 1959)। "स्टेरियोड्स। CVI। 7β-मेथिल हार्मोन एनालॉगको संश्लेषण "#:। अमेरिकी रासायनिक सोसाइटीको जर्नल. 81(2): 432-436।
तपाईंले बिक्रीको लागि Dianabol पाउडर बारे सबै जान्न आवश्यक सबै कुरा माथि 15 Winstrol फायदा तपाईं Winstrol अनलाइन खरीद गर्नु अघि जान्न आवश्यक छ